Nkwado nke Atụmatụ Inbound Marketing | Martech Zone
Satọde, 15 Juun 2013 Satọde, 15 Juun 2013 Douglas Karr
Anyị anọwo na-ele ndị ahịa anya nnukwu na obere ruo ọtụtụ ọnwa ugbu a ma kwenyesie ike na enwere ụfọdụ ọdịiche na ọtụtụ atụmatụ yana ọtụtụ ụdị na ndị ọzọ. Mgbe ndị ahịa anyị na-agba mgba, anyị na-ahụkarị na ọdịiche dị na ntinye ntụkwasị obi nke ahịa ha niile. Usoro ịzụ ahịa inbound na-aga nke ọma nwere ike ghara ịgụnye ahia ahia, ije ozigbo or mmepe obodo - mana ọ dabere n’elu ha.
Brand - ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịnweta usoro ịre ahịa inbound nke ọma ma ọ bụrụ na ịnweghị ihu na mmetụta na-agbanwe agbanwe, izi ozi siri ike na olu maka ụlọ ọrụ gị, ngwaahịa na ọrụ. Ndị mmadụ kwesịrị ịmata gị ma ghọta uru ị na-erite na ha.
Njikwa - a na-ahụkarị mgbasa ozi dị ka mgbalị mmekọrịta ọha na eze mana ịgbatị ndị na-ege gị ntị site na ịchọta ndị ọzọ na ntanetị dị mkpa. Ọtụtụ ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi ga-agwa gị na ị na-ewu ndị na-ege gị ntị. Kedu ihe kpatara ị ga - eji mee nke a ma ọ bụrụ na mmadụ nwere ndị na - ege ya ntị? Gaa chọta ha!
Community - na-agwọ ma na-eto eto ndị na-ege ntị n'ime obodo na-eme nke ọma chọrọ atụmatụ pụrụ iche nke ọdịnaya, ọtụtụ nlebara anya, na otu ndị nwere nkà. Agbanyeghị, ozugbo inwere obodo - ị nwere ndị ahịa ahịa. Ọ bụ grail dị nsọ nke mgbasa ozi mmekọrịta!
akakabarede - na-enweghị mmezi kwesịrị ekwesị nke nchịkọta, njikarịcha na nnwale, ị gaghị enwe ike ịgbanwe ndu ị nwere n'ime ndị ahịa. Chọpụta, ịlele ma melite ụzọ gị iji tinye aka dị oke mkpa.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-echegbu onwe ha banyere ịkekọrịta òkè nke mmefu ego ha na-azụkarị ụlọ ọrụ ha. Nsogbu bụ na ndị a dị ka ụkwụ na tebụl… mgbe i wepụtara otu, ndị nke ọzọ anaghị arụ ọrụ nke ọma. Mgbe anyị na onye ahịa na-arụ ọrụ, anyị na-ekwusi ike ma ọ bụ na-amanye ha ka ha rụọ ọrụ mbọn ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze na mmepe obodo ụlọ ọrụ.
Ọbụna ma ọ bụrụ na anyị dị irè 100%, na-enweghị nke ọ bụla n'ime ihe ndị ọzọ, usoro ịre ahịa inbound adịghị mma. Gbaa mbọ hụ na ịdabere na ntinye ọ bụla na-enye ụlọ ọrụ nnukwu ahịa iru, ikike na arụmọrụ.
Jun 17, 2013 na 1:39 AM
Usoro dị irè maka ire ahịa. On usoro ahia ahia bu ihe kachasi mkpa maka inweta ihe ịga nke ọma. Enwere m anya na isiokwu gị ga-enyere m aka !!
Jun 17, 2013 na 6:49 AM
Akwa post Doug! M hụrụ n'anya post ebe a .. Daalụ maka ịkekọrịta…